Kutenderera kwefekitori - Kingsine Electric Automation Co, Ltd
Production Management inounza manejimendi manejimendi kuve nechokwadi chekuti yega yega yekugadzira link, inosanganisira purogiramu, kutenga, Kugadzira, mhando, zvishandiso, kuchengetedza, nezvimwe, zvinogona kunge zvichimhanya zvakanaka uye nemazvo.
Kuburikidza anopfuura makore gumi ekuvandudza uye kuunganidza, isu takagadzira yavo yakakwana kugadzirwa uye ISO9001: 2008 mhando manejimendi manejimendi. Saka kuti tikwanise kuona mhando yechigadzirwa, huwandu uye yakatumirwa nguva.
Yepamberi yekuyedza uye yekugadzira michina zvakare zvakanyanya kuwedzeredza yedu yekugadzira chiyero uye kuona mhando yedu.
R & D Mbiri
Kingsine inopa suite ye software zvishandiso izvo zvakagadzirirwa kuti zviitise nyore mashandiro uye yakakwira danho repamusoro rekugadzirisa kwe AC madhiraivha.
Zvimwe zvacho zvishandiso zvewebhu-based; mamwe mapurogiramu akazvimirira anozoda kuiswa kuPC yako. Pamusoro pezvo, kumwe kusimudzira uye masisitimu ekugadzirisa masisitimu anowanikwa enhengo dzehumambo Partner Chirongwa. Unogona kuverenga zvakawanda nezve chirongwa pano.
Kuti ikubatsire iwe kuwana zvakanyanya kubva mukushanda navo, chishandiso chega chega chine yakavakirwa-mukati mushandisi gwara.
Kuita kuti zvive nyore kwauri kuti utore chishandiso chakakodzera, zvakaiswa mumapoka akasiyana zvichienderana nechinangwa chauchange uchizoshandisa kana zvine chekuita nemabhenefiti chaiwo.
Mari yezvikamu Kingsine Electric Automation Co., Ltd.
Munhu Wekubatana: Miss. Carol
Runhare: + 86-755-83418941
Dziviriro Relay Tester, Dhijitari Relay Bvunzo, Akangwara ataure Tester, Kure Kwekuchengetedza Relay Tester, Musiyano ataure Tester, Kudzokorora Bvunzo, Zvese Zvigadzirwa